Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo cadaalad u raadinaya Sheekh Aweys Cabdullahi - Wardeeq 24 TV Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo cadaalad u raadinaya Sheekh Aweys Cabdullahi Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo cadaalad u raadinaya Sheekh Aweys Cabdullahi
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo cadaalad u raadinaya Sheekh Aweys Cabdullahi
Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) ayaa bilaabay inuu Sheekh Aweys Cabdullahi la raadiyo cadaaladda uu maamulkiisa uga baahan yahay.
Sheekh Aweys Cabdullahi oo ah aabaha dhalay wiilkii iyo gabadhii walaalaha ahaa ee bishii hore ee April lagu dilay Magaalada Baydhabo ayaa sheegay inaanu ku qanacsanayn qaabka loo wajahay baaritaanka dilka gaystay carruurtiisa.
Sheekh Aweys Cabdullahi oo sidoo kale ka mid ah Culima’udiinka Magaalada Baydhabo ayaa tilmaamay in baaritaanka la sameeyay uu muujinayo inay jiraan waxyaabo badan, oo aan lagu qanci karin iyo in la’iska indho-tiraayo xaqiiqada dadka la tuhmayo in kiiskaasi ay ku lugta leeyihiin.
Taliska Booliska ee Gobolka Baay ayaa Sabtidii sheegay in haweeneyda loo hayo kiiskaasi, ay iyadu kaxeysay carruurta, ka hor intii aan la waayin carruurtaasi. Haweeneydani ayaa ah afada Sheekh Aweys Cabdullaahi.
Previous articleGuddoomiye Mursal oo Arrimaha doorashooyinka kala hadlay Wafdi ka socda Qatar
Next articleRooble “Waxaa naga go’an in aan dhowrno bad-qabka Saxafiyiinta”